ပါလက်စတိုင်း အပြစ်မဲ့သူများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်- Rabbi Michael Avraham
ပါလက်စတိုင်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
တုံ့ပြန်မှု > အမျိုးအစား- အထွေထွေ > ပါလက်စတိုင်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
ရှူး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လက မေးတယ်။
ဟားမတ်စ်များအပေါ် အစ္စရေး၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည့် အပြစ်မဲ့ ပါလက်စတိုင်းများကို လျော်ကြေးပေးရန် အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ တာဝန် ရှိပါသလား။
နောက်တစ်ခု မေးစရာရှိရင် လဲမယ်။ အမှား တပ်ဖွဲ့တစ်ခု၏ ဆောင်ရွက်မှုတွင် ပါလက်စတိုင်းတစ်ဦး ဒဏ်ရာရသွားခြင်းကြောင့် လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ရှိပါသလား။
မီကင်း ဝန်ထမ်း လွန်ခဲ့သော5လကဖြေဆိုခဲ့သည်။
ခံစစ်တံတိုင်း (တစ်ဦးချင်းနှင့် အများသူငှာ) ၏ အကျပ်အတည်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်၏ ဆောင်းပါးတွင် နိဂုံးချုပ်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် (ပါလက်စတိုင်းမဟုတ်သော) ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဟုတ်ကဲ့၊ ထို့နောက် ဟားမတ်စ်ကို တရားစွဲနိုင်သည်။ ပျက်စီးမှု။ ဒါပေမယ့် ပါလက်စတိုင်းကိစ္စမှာတော့၊ သူတို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဟားမတ်စ်တွေဆီ တိုက်ရိုက်လှည့်ပတ်သင့်ပြီး ဘယ်သူ့တာဝန်က သူတို့ကို လျော်ကြေးပေးမလဲ။ မလိုအပ်ဘဲ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သည်တွေကို လျော်ကြေးပေးဖို့ မလိုအပ်သလို၊ စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါ အတုံးတွေ ပက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။
ရှူး လွန်ခဲ့သော5လက အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူသည် ခြေလက်တချောင်းတည်းရှိ၍ မကယ်တင်နိုင်လျှင် ကယ်တင်ရမည်ဟု ရေးထားသည်ကို သတိရမိပါသည်။ အမှားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဤနေရာတွင်လည်း အဘယ်ကြောင့် မမှန်ကန်သနည်း။
မီကင်း ဝန်ထမ်း	လွန်ခဲ့သော5လက အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ပထမ၊ သူကယ်တင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။ ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ အားနည်းတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရှိတယ်။ ဒုတိယ၊ ဤကိစ္စရပ်တွင် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး စစ်ပွဲကမ္ဘာကြီး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရှောင်ရှားရန် နည်းလမ်းရှိလျှင်ပင်။
Maimonides ၏နည်းလမ်းမှာ ထိုကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်ခြင်းမှာ မလိုအပ်ပါ။ တားမြစ်ထားသော်လည်း သူသည် လူသတ်သမားမဟုတ်ပါ။ Thos နည်းလမ်းက ဟုတ်ပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို မလိုအပ်ဘဲ မတော်တဆ ထိခိုက်မိပါက လျော်ကြေးပေးရန် မလိုဟု Hasbra က ဖော်ပြသည်။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသော သူ့ကိုယ်သူ သတ်ရန် တားမြစ်ထားခြင်းမရှိဟု ပထမနှင့် နောက်ဆုံးအချို့က ရေးသားခဲ့သည်၊ ဒါက တတိယပါတီအကြောင်းပဲ ပြောတာ။
အစ္စရေးနိုင်ငံတော်၏ အရာရှိများထဲမှတစ်ဦး (စစ်သား/ရဲသား) သည် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးအပေါ် မသမာသော လုပ်ရပ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့သည် (စစ်သားတစ်ဦးသည် ပါလက်စတိုင်းတစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့)။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတစ်ဦးတည်းအား လျော်ကြေးပေးရန် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်၏ တာဝန်တစ်ရပ်ရှိပါသလား။
ထင်တာပဲ။ အဲဒီအခါကျရင် နိုင်ငံတော်ကို ပြန်ပေးမယ့် စစ်သားကို တရားစွဲဖို့ နေရာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပေးခဲ့တဲ့ စွမ်းအားနဲ့ ခွန်အား (အခွင့်အာဏာနဲ့ လက်နက်) အပေါ်မှာ ပြုမူခဲ့တာမို့ သူ့လုပ်ရပ်အတွက် သူမမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
လက်နက်အာဏာ သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အခြားမည်သူမဆိုကဲ့သို့ပင် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပါက၊ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ ၎င်းသည် ၎င်းအပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်မရှိပေ။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အထက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အမှားတွေအတွက် နိုင်ငံတော်က တာဝန်မကင်းဘူးဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထားရှိသလဲ၊ ဒီနေရာမှာတော့ ၀န်ကြီးတွေရဲ့ ယုတ်မာမှုတွေအတွက် တာဝန်ရှိတယ် (နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမြင်အရတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်။)
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စစ်ပွဲအတွင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအကြောင်း ပြောဆိုမှုများရှိနေပြီး စုပေါင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ဥပဒေရှိသောကြောင့် တာဝန်မရှိပေ။ သို့သော် စစ်ပွဲအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်သော နိုင်ထက်စီးနင်းပြုမှုတစ်ခုသည် လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ရှိသည်မှာ သေချာပါသည်။ ဒီမှာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတဲ့ ဥပဒေမရှိဘူး။
အလားတူ အမှုတွဲတစ်ခုသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် မူစတာဖာဒီရာနီသည် ၎င်း၏စစ်ဆေးမေးမြန်းသူများ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု ၂ မှုခံခဲ့ရသည်ဟု ဆိုကာ အစ္စရေးနိုင်ငံကို နစ်နာမှုအတွက် တရားစွဲခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အခြားအရာများထဲတွင်၊ "Captain George" ဟုလူသိများသော ယူနစ် 2000 မှဗိုလ်သည် Dirani ၏စအိုထဲသို့၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်ဟုတရားစွဲဆိုထားသည်။ Dirani ၏ အဆိုအရ ၎င်း၏ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအတွင်း တုန်လှုပ်ခြင်း၊ အရှက်ရခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနှင့် နာရီပေါင်းများစွာ ဒူးထောက်ထားသည့် အနေအထားဖြင့် ချည်နှောင်ခြင်း အပါအဝင် အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းအတွက် သူသည် အဝတ်ဗလာဖြင့် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ Unit 10 မှရိုက်ကူးသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတိပ်ခွေများကို 504 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 15 ရက်နေ့တွင် "Fact" ရုပ်သံအစီအစဉ်တွင် ပြသခဲ့ပါသည်။  ဗီဒီယိုများထဲမှ တစ်ခုတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး George သည် အခြား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးတစ်ဦးကို ခေါ်ကာ ၎င်း၏ဘောင်းဘီကို Dirani ထံလိပ်ပြီး အချက်အလက်မပေးပါက Dirani အား မုဒိမ်းကျင့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ထားသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။ 
2011 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် တရားရုံးချုပ်က အများစု၏အမြင်အရ Dirani သည် ရန်သူနိုင်ငံတစ်ခုတွင်နေထိုင်သော်လည်း အစ္စရေးနိုင်ငံအပေါ် စွဲဆိုထားသည့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်။  ပြည်နယ်၏တောင်းဆိုချက်အရ၊ နောက်ထပ်ကြားနာမှုတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီး၊ 2015 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် Dirani ၏တောင်းဆိုချက်ကို ဖောက်ဖျက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ Dirani သည် ဖမ်းဆီးခြင်းမှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် နိုင်ငံတော်အား အရေးယူရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ ဖျက်ဆီးတတ်၏။
တရားခံသည် ရန်သူနိုင်ငံ၌ နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဟူသော မေးခွန်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကို ဤအချက်မှ ရှုမြင်ပါသည်။ ရန်သူကို တရားမစွဲနိုင်တဲ့ ဗြိတိသျှလက်ထက်က ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခုလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ သတိရမိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အဖြေများသည် ဥပဒေမဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ပါ)။ ကိုယ်ကျင့်တရားအဆင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အမြင်ကို ပြောခဲ့တယ်။
Dirani နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာမှာ သူသည် ရန်သူပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သည်မဟုတ်ဘဲ တက်ကြွသောရန်သူဖြစ်သည်။ ရန်သူနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူတိုင်းသည် လျော်ကြေးငွေကို သေချာပေါက် တောင်းခံနိုင်သော်လည်း စစ်ပွဲအတွင်းတွင်မဟုတ်ဘဲ (ဆိုလိုသည်မှာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို မတော်တဆ ထိခိုက်နစ်နာစေမှု) တွင် တရားမ၀င်ဘဲ တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ပါက၊ ဒီညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေက သူ့ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ သူ့ဆီက အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ယူဖို့ လုပ်ခဲ့တာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေဟာ စစ်ဆင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် GSS စက်ရုံတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သူ့ကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့လျှင်ပင်၊ ရန်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်ပင် လျော်ကြေးငွေတောင်းခံနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ထိုနေရာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်။
စကားမစပ်၊ သူသည် နိုင်ငံတော်ကို ဖျက်ဆီးမည်ဆိုပါက ၎င်းသည် ၎င်း၏ အဖွဲ့အစည်းများကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးစေသည်ဟု ငြင်းဆိုခြင်းသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အတော်လေး သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ရန်သူ (သုံ့ပန်း) စစ်သားတိုင်းဟာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ရှိနေကြပြီး စစ်သားအကြောင်း ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူသည် အကြမ်းဖက်သမားတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် Dirani အကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ ဤနေရာတွင် အငြင်းအခုံတစ်ခုရှိပါသည်- အလွဲသုံးစားမှုသည် ခွင့်ပြုထားသည့်အရာထက်ကျော်လွန်သွားပါက သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၏ တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက၊ Dirani သည် နိုင်ငံတော်အား တရားစွဲပိုင်ခွင့်မရှိသော်လည်း ထိုသို့ပြုလုပ်သူများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အပြစ်ပေးသင့်သည် (ရာဇ၀တ်ပြစ်ဒဏ်၊ Dirani ၏အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှုမသက်ဆိုင်ပါ။) မသွေဖည်ခဲ့ပါက၊ သူသည် ရန်သူဖြစ်ရန် ဘာကိစ္စရှိသနည်း။ အရေးယူစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
အကြမ်းဖက်သမားများအား လျော်ကြေးငွေပေးဆောင်ပါ။ လွန်ခဲ့သော5လက အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
B.S.D. XNUMX P.B. အနွယ်
IDF မှ လူသတ်သည့် လုပ်ရပ်များတွင် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များသည် ခုခံကာကွယ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများ၊ ဂျူးများနှင့် အာရပ်လူမျိုးများအား တိုက်ပွဲများအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော နစ်နာကြေးများအတွက် လျော်ကြေးငွေများ ပေးဆောင်နေရပုံရသည်။